Soosaarka Mashiinka Shiinaha iyo Warshad | SHAQAYNTA
Mashiinkayaga wax lagu buuxiyo ayaa si weyn loogu isticmaalay baakadaha iyo shirkadaha yaryar ee waxsoosaarka warshadaha dufanka iyo warshadaha dufanka leh ee Shiinaha. iyo weel kale oo ah cabbirka otomaatigga ah, buuxinta.Waxyaalladan taxanaha ahi waxay leeyihiin hal madax, madax labalaab ah, iyo moodallo kale, waxay dabooli karaan baahiyaha kala duwan ee isticmaalayaasha dhammaan noocyada baakadaha looga baahan yahay
1 xaddiga tirada: 0.2-2L 2-18L 2 saxnaanta buuxinta: ± 0.5%
12L / min (1 L foosto nooca foosto)
4. Cadaadiska hawada: 0.4Mpa
5. Isticmaalka gaaska: 0.6m3 / daqiiqo
6 Qaabka Awoodda ee gudbinta mootada: Y160L-8 / 7.5KW
7. Cabirka; 2600 * 1800 * 2550 mm (laba geesood)
Miisaanka saafiga ah: 1200-1800 kg
Mashiinkaani waa mitir cabbir iyo cabir baaxad weyn leh, kaasoo ka kooban laba qaybood: qalab gaarsiinta iyo buuxinta. Labada qaybood ayaa isku xidha guud ahaan tuubooyin.
Mashiinkaani waa nooc labo-madax leh, waxaa loo isticmaali karaa salka kalsiyum, dufanka salka iyo koollada iyo walxaha kale ee dareeraha ah ee buuxinta iyo buuxinta.
1 Qalabka gudbinta qayb:
Qeybtu waxay ka kooban tahay jir, koox silsilad ah, barxad wax lagu qaado iyo auger qaadista.
Sababtoo ah dareerayaasha liita ee dufanka iyo walxaha kale ee dareeraha ah, qalabka gudbinta auger qalabka gudbinta ayaa la qaatay.
Markaad shaqeyneyso, foosto foosto ay ka buuxaan walxaha 180 litir ku riix madal qaadista. Laba dhululubada ayaa wada miiska shaqada si ay kor ugu kacaan. Isla mar ahaantaana, auger-ku wuxuu u rogmadaa inuu alaabta ku jiro fuustada toosan kor ugana soo diro xagga dekedda sare qaybta buuxinta.
2 Qeybta Buuxinta:
Qaybta buuxinta waxay ka kooban tahay qaab, madax cabir cabir ah iyo xakameeye bilow ah.
Nidaamka buuxinta mitirka waxaa xakameynaya waalka lugta ama waalka gacanta lagu shaqeeyo. Madaxa buuxinta mitirku wuxuu ka kooban yahay dhululubada qiyaasta mitirka iyo waalka wareega.
Qeybta hoose ee bistoolada cabirka dhululubada waxaa ku qalabeysan dial si loo habeeyo cabbirka mugga, kaasoo hagaajin kara qaddarka buuxinaya iyadoo loo eegayo baahida loo qabo.
Muga dheeriga ah ee dialku wuu yaraadaa mugga gacanta bidixna wuu kordhaa.
Bilowga buuxinta, baaldiga (bacda) wuxuu la jaan qaadayaa dekedda laga sii daayo, si ay ugu dhowdahay gunta baaldiga (bacda). Inta lagu jiro buuxinta, maaddadu waxay hawada ka soo saari doontaa baaldiga (bacda) hareeraha sanka buuxinta iyagoo cabbiraya socodka hoose. Isla mar ahaantaana, maaddada (bacda) ayaa hoos ugu dhaadhici doonta dhammaystirka buuxinta.
3 Nidaamka korantada iyo mabda'a shaqada pneumatic:
Wareegga auger ee mashiinkan waxaa wata mooto. Waxaa jira kabadh xakamaynta korontada ka dambeeya fuselage iyo aaladda gudbinta kuleylka ee ka ilaalinta culeyska badan ee mootada.
Badhanka badhanka mootada ayaa lagu dhejiyay qaybta hore ee mashiinka buuxinta.
Marka lagu daro qaybaha kale ee kor ku xusan waa xakamaynta pneumatic, maaddada gudbinta qayb ka mid ah golaha xakamaynta hawada ee hore ee fuselage, qaybta buuxinta ee nidaamka xakamaynta hawada ayaa lagu rakibay mashiinka buuxinta.
Qaybta gudbinta ee maaddadu waxay xaqiijin kartaa ficilka fuulista foostada, joojinta foostada iyo daadinta foostada.
Qaadista iyo buuxinta waxaa loo maamulaa si gooni gooni ah, foostooyinka sare iyo kuwa hoose (boorsooyinka) waxaa lagu shaqeeyaa gacanta.
Hawada la cadaadiyey ee ka timaadda saldhiga gaaska ama kombaresarada hawadu waxay soo gashaa mashiinka sifeynta kadib.
Hawada la cadaadiyey waxay soo galeysaa silsiladda iyo walxaha macquulka ah iyada oo loo marayo qalabka wax lagu gooyo, kala-soocaha silsiladda, cadaadiska habeeya cadaadiska, qalabka ceeryaanta saliidda, waalka dib u noqda.
Nidaamka shaqada ee Pneumatic: baaldiga (bacda) madhan wuxuu isku toosinayaa sanka buuxinta, wiishka lugta ayaa la bilaabay, madaxa buuxinta ayaa bilaabay inuu shaqeeyo, baaldiga (bacda) ayaa si isku mid ah hoos ugu dhacaya, buuxintiina way dhammaatay, baaldi (kiish) ayaa ku dhacaya booska, cabbiraadda waxaa lagu soo celiyey meeshi asalka ahayd maadadiina waa lagu neefsadaa.
Adigu gacanta ku soo saar baaldiga (bacda) ka dibna baaldiga dusha sare ka saar (bacda) ka dibna bilaw lugta wareegga wareegga shaqada ee xiga.
Hore: 8 Sano Dhoofiye Hammer Dufan - Petroking Ep2 Ep3 Lithium Dufanka 17kg Pail - PETROKING
Xiga: Saliida Saliida ee Yellow Multipurpose Lithium Dufanka 1kg Pouch
Mashiinka Buuxinta Drum
Dufan Loogu Tala Galay Mashiinka